ပရိတ်​သတ်​​တွေ သ​ဘောကျ​စေ​လောက်​တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ ပုံအသစ်​​လေး​တွေ - Cele Platform
ပရိတ်​သတ်​​တွေ သ​ဘောကျ​စေ​လောက်​တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ ပုံအသစ်​​လေး​တွေ
October 18, 2018 Cele Platform Celebrities 0
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေကို အမြဲတင်ပေးလေ့ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကို အားပေးချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံ အသစ်တွေကို ထပ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အနီရောင် အင်္ကျီလေးနဲ့ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေလွန်းပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သင်ဇာရဲ့ အလှမှာ ကြွေဆင်းနေကြပါပြီ။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။
SOurce: Thinzar Wint Kyaw
သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတှထေဲက တဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို ရရှိထားတဲ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ သူမရဲ့ အမိုကျစား ဘျောဒီကွောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုတှကေို ရရှိထားသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ဖဈေဘုတျပျေါမှာ အနုပညာလှုပျရှားမှု ပုံရိပျတှကေို အမွဲတငျပေးလရှေိ့တဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမကို အားပေးခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဓါတျပုံ အသဈတှကေို ထပျပွီးတော့ တငျပေးထားပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ အနီရောငျ အင်ျကြီလေးနဲ့ အရမျးကို ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိလှနလှေနျးပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သငျဇာရဲ့ အလှမှာ ကွှဆေငျးနကွေပါပွီ။
သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ ဓါတျပုံလေးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး အားပေးလိုကျကွပါဦးနျော။
​မွေးမိခင်​ကြီးကို ​မောင်​နှမ​တွေ စုံစုံညီညီနဲ့ ကန်​​တော့ခဲ့တဲ့ Kညီ
တစ်​မျိုးမထင်​ပါနဲ့ဆိုပြီး နှစ်​​ယောက်​တွဲပုံ​တွေတင်​လိုက်​ပြန်​တဲ့ ဆိုင်းမိုင်​နဲ့ ရဲ​သွေး
ယုတ်မာတဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့လူယုတ်မာတစ်ယောက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတာ အကုသိုလ်များတယ်ဆိုတဲ့ ပြေတီဦး
သိန်း (၆၀) ဖိုး အဆီထုတ်​ထားလို့ ပိန်​တာဆိုပြီး ​ဝေဖန်​​ကြသူ​တွေကို ထိထိမိမိ တုံ့ပြန်​လိုက်​တဲ့ ​နေခြည်​ဦး
အမေဇုန်တောမီးလောင်မှုအတွက် ယူရို ငွေ(၄၄) မီလီယံ လှူဒါန်းကာ တကမ္ဘာလုံးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို
Ivy လေးအသက်(၁၈)နှစ်မပြည့်မချင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ရည်းစားထားဖို့လုံးဝမစဉ်းစားဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
About Cele Platform
Cele Platform is Myanmar’s popular online media and entertainment platform providing real-time news, health, knowledge, business, tech, horoscope, amazing, photos and videos for our readers. Cele Platform provides the best experience through its dedicated mobile friendly site. Readers can read both Zawgyi and Unicode Font.